Upgrade Your Daily Speed (July Promotion) - Shwe Lamin Nagar Group of Companies
Shwe Lamin Nagar Group of Companies > Promotion > Upgrade Your Daily Speed (July Promotion)
Upgrade Your Daily Speed (July Promotion)
ချိုးကလေး တကူ ကူး။
လူတိုင်းငယ်ငယ်က ဒီကဗျာလေးသင်ခဲ့ကြရမှာပါ.. တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာဆိုရင် ချိုးကလေးကူသံသာပြီ.. အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူးဆိုရင်တော့ တကူးကူး နဲ့ ပျော်ရွှင်မြူးတူးတဲ့နေ့.. ကြာသပတေး ၊ သောကြာမှာ မှန်မှန်လာတယ်.. ဒါပေမယ့် စနေနေ့မှာ တော့ သူ့ခမျာ မအားရှာလို့ မလာနိုင်ခဲ့.. ဒါက လူတိုင်းရဲ့ ငယ်ဘ၀အမှတ်တရ ကဗျာလေးဖြစ်ပါတယ်.. ဒီကဗျာလေးထဲကအတိုင်းဆိုရင်တော့ ဒီနေ့က ချိုးကလေးလာတဲ့နေ့ပါ.. ဒါပေမယ့်.သူတစ်ကောင်ထဲ မလာခဲ့ပါဘူး.. SLN Myanmar ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် “ Upgrade Your Daily Speed “ ဆိုတဲ့ ပရိုမိုးရှင်း ငှက်လေးကိုပါအဖော်ခေါ်ခဲ့တာပါ..
စေတနာကောင်းတဲ့ ချိုးကလေးပါ..😁 ကဲ..ဒါဆို ချိုးကလေးခေါ်လာတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းပြောပြပါမယ်.. ကျောင်းသုံး ၊ ရုံးသုံးအတွက် သာမန်လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့
Acer Aspire E5-476(i3) 8th gen
(http://sln-myanmar.com/2018/12/27/aspire-e5-476-i3-8th-gen/) အတွက် ပိုမိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် သုံးလို့ရအောင် SSD 120GB Free Upgrade ဒီဇိုင်းလန်းပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့
Aspire 5(i3) 8th gen
Aspire 5G(i3) 8th gen
(http://sln-myanmar.com/2019/05/15/acer-aspire-5-gi3-8th-gen/) အတွက် SSD 120GB Free Upgrade နောက်ပြီး Video editing , photoshop နဲ့ software အမြင့်တွေသုံးမယ့်သူတွေ၊ ဂိမ်းဆော့မယ့်သူတွေရွေးချယ်သင့်တဲ့
Aspire E5-576G(i7)8th gen
(http://sln-myanmar.com/2019/06/10/aspire-e5-576g-i7-8th-gen/) အတွက် cash back $ 30 နဲ့ RAM 4GB လက်ဆောင် ပေးသွားမှာပါ..
Promotion ကာလက ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့ ကနေ ၃၁ ရက်နေ့အထိဖြစ်ပြီး အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာရှိတဲ့ Shwe Lamin Nagar Co., Ltd. ရဲ့ Dealer / Reseller ဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူခံ စားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ✴ Acer Products များကို Shwe Lamin Nagar Co., Ltd. မှ မြန်မာပြည်တွင် တရားဝင် တင်သွင်းဖြန့်ချီပြီး အမြို့မြို့အနယ်နယ်ရှိ Computer ဆိုင်ကြီး ( Shwe Lamin Nagar Co., Ltd. ၏ Partner Shops ) များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
✴ P.S : Customer များအနေဖြင့် Acer Product များ ဝယ်ယူလျင် ရွှေလမင်းနဂါးကုမ္ပဏီ ပစ္စည်း ဟုတ်မဟုတ် ( Company Seals ပါမပါ ) သေချာစီစစ်ပြီး ဝယ်ယူစေလိုပါသည်။ ✔💯 ✔💯 Shwe Lamin Nagar Co.,Ltd မှ တရားဝင် တင်သွင်းထားသော Product များအတွက်သာ Warranty ခံစားခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ( ဆင်တူယိုးမှား ✖️သတိပြုစေလိုပါသည်။ )
အိမျသုံး ၊ ကြောငျးသုံး ၊ ရုံးသုံးအတှကျ အရညျအသှေးကောငျးကောငျး...
Welcome 2020 Promotion
“Winter is coming!!”
ZELUS – E1LE